Ireo fomba fiasa hampiasa fakan-tsary amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Ireo fomba fiasa hampiasa fakantsary miady amin'ny vatana
Ny fakan-tsary mihetsika ho an'ny vatana dia nitazona ny làlan-dry zareo ho ao amin'ny lisitr'ireo masoivoho fampiharana izay ilaina indrindra, rehefa avy nizaha ny fakan-tsary sy ny fampiasan-dry zareo ny fanazaran-tena sy ny fitsirihana, dia nisy fifanarahana manodidina an'io; dia zava-dehibe tokoa amin'ny fitazonana ireo karazana fandikan-dalàna manokana ataon'ny manampahefana ao amin'ny lalàna sy ny olom-pirenena. Tsy vaovao fa ny fakantsary efa nitafy vatana dia nanintona saina be dia be indrindra avy amin'ireo maso ivoho mpampihatra lalàna. Ny matihanina ao amin'ny masoivoho mpampihatra lalàna dia nieritreritra lalina momba ny mety hisian'ny fananganan'anaka izay entiny indrindra fa ny fahafahana manara-maso ny asan'izy ireo. Ny programa fakan-tsary miakanjoana dia raisina ho toy ny fomba hampitomboana ny fandraisana andraikitra, fangaraharana ary koa ny fifandraisan'ny polisy sy ny fiarahamonina (fifandraisana izay tsy dia tsara tahaka ny olona tsy tia ny polisy).
Araka ny efa voalaza teo aloha, ny teknolojia manome hainganana fanaraha-maso dia tsy nanomboka ny 21st taonjato. Tany am-piandohan'ny 90, nisy ny fampiasana ankapobeny ny fakan-tsary dashboard izay nampiasaina an-tsoratra ny fifandonana na izay mitranga eo amin'ny manamboninahitra sy ny olom-pirenena raha toa ka mandeha amin'ny rotra izy ireo. Na dia teo aza ny fandavana ny hevitra voalohany, ny manamboninahitra dia nanohitra azy ireo fa maro amin'izy ireo no tsy mila "rahalahin'ny beso" raha ny mahazatra azy ireo no namerina ny fakantsary. Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia nitombo ny tranga izay niampangan'ny olom-pirenena ireo tompon'andraikitra tamin'ny zavatra maro, indrindra fa ny fampiasan-kery tsy ilaina amin'ny raharaha. Tsy ela dia nanomboka nanaiky ny fakan-tsary dashboard ireo tompon'andraikitra ary tsy ela dia nisy ny fanekena faingana. Tamin'izany fotoana izany, ny fahitalavitra mihidy (CCTV) dia tena nahazo toerana ary nanjary tena ilaina amin'ny famahana ny raharaha mora sy misy porofo marobe. Ary koa, ny fitrandrahana finday dia efa nanome ny rehetra fakan-tsary, na iza na iza afaka maka sary amin'ny fotoana rehetra sy na iza na iza na iza. Talohan'ny nahitan'ireo mpampiasa telefaona azy ireo dia nanoratra azy ireo hanoratra ireo polisy nefa eo am-piadidiany, dia ilaina izany ary ilaina ny hananan'ny manampahefana teknolojia manokana ho azy ireo. Tamin'ny fanadihadiana natao tany Etazonia vao haingana, dia tsikaritra fa neken'ny ankamaroan'ny olom-pirenena ny fampiasana ny fakantsary fiakanjo. Fitaovana efa nekeny sy nankatoavina no natao ho ekena.
Ny fitomboan'ny fidirana sy ny fanalana ny rafitr'ity teknolojia ity dia mitondra olana sarotra, misy ny olana sasany; rehefa azo raisina ny firaketana an-tsoratra, ny fenitra izay tsy maintsy arahana ny rakitra tokony hotehirizina ary avy eo ny fampiasana azy, ny fampahafantarana ary koa ny fanarahana ny ho avy miaraka amin'ny geotagging (GPS) ary ny teknolojia fankatoavana ny tarehy. Na izany aza, ny fiaraha-monina sasany dia manambara fa ny sandan'ny fandehanana an'ity programa ity dia mihoatra ny tombony azo avy amin'izany, manapa-kevitra ny tsy hampiasa na hampiasa azy io. Ao amin'ity fanoratantsika ity dia manantena izahay fa hanome torolàlana amin'ny izay safidin'ny vondron'olona hifanaraka amin'ny teknolojia, miaraka amin'ity fametrahana ity dia manalavira ny dinika isika raha tokony hampihatra ilay programa na tsia. Matetika isika dia mijery ny politika ilaina amin'ny fitantanana ny fiarahamonina ary miaro ny zon'olombelona. Ny olana sasany tokony hodinihin'ny departemanta dia:
Andraikitry ny polisy
Vokany amin'ny fanavakavahana, na amin'ny fifaneraserana amin'ny sivily sy ny sampana mpampihatra lalàna
Mikasika ny tsiambaratelo ny manamboninahitra na mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina
Misy fiantraikany amin'ny fitondrantenam-bahoaka sy ny vahoaka koa
Ny fahalemena ao amin'ny departemanta
Manome fahafahana ho fampiofanana polisy
"Video bias" nataon'ny juri sy ny departemantan'ny polisy
Mitaky fomba fisainana lojika, ao anatin'izany ny loharanon'olombelona sy ny vidin'ny fitantanana ny rafitra.
Na izany aza, tsy fakan-tsary ny fakan-tsary miakanjo. Ny fametrahana azy ireo tsy misy paika tsara ahafahana manohana azy ireo dia mety hiteraka faharatsiana lehibe amin'ireo maso ivoho fampiharana ary mikasa ny hanompo izy ireo. Anisan'ireny ahiahy ireny ny fiantraikany mety hitarika amin'ny soatoavina sy ny zon'ny lalampanorenana. Araka ny tokony ho izy, ny masoivoho dia tsy maintsy mandinika ny tombontsoa sy ny fatiantoka entin'ny fakantsary vatana rehefa hanapa-kevitra na amin'ny fomba ahoana no hametrahana azy ireo hifanaraka amin'ny fiaraha-monina mitombo sy mivoatra. Miezaka izahay hijery ireo olana manokana izay mety atrehan'ny masoivoho fampiharana sy ny fiaraha-monina rehefa manandrana mametraka ny fakan-tsary miakanjoakan'akanjo. Ny komity tetik'asa momba ny lalàm-panorenana momba ny fanavaozana ny politika dia manome soso-kevitra sasany fa na izany aza dia mino fa azo ampiasaina hamahana na hanamaivana kokoa ireo olana ireo. Ireo fahazoan-kevitra ireto dia fintina etsy ambany toy izao manaraka izao:
Ny fakantsary vita amin'ny vatana dia tsy tokony ampiasaina afa-tsy ny tanjona voafaritra mazava sy voakaly, tsy tokony ampiasaina amin'ny fampiasana an-trano na tsy matihanina ho an'ny olana tsy miasa.
Ny mpanao pôlitika dia tsy maintsy misy ny fifampiresahana sit-ny miaraka amin'ireo mpiasan'ny fampiharana ny lalàna satria mihodina ny fakan-tsary mihetsika mba hampiasaina amin'ny faritra eo ambany fiadidiany.
Ny mpanao politika dia tsy maintsy miara-miasa amin'ireo vondron'olona ary manana fifanarahana miaraka amin'izy ireo momba ny fitsipiky ny faneken'izy ireo sy ny fomba hitondrany ny fampiasana ny fakantsary fiakanjoakan'ny masoivoho.
Rahoviana no mirakitra
Ny politika mazava voalaza dia tokony hisy fizarana izay misy ilay karazana hetsika hitantarana na mety milaza fotsiny fa ny asa rehetra mifandraika amin'ny asa dia voarakitra.
Ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy afaka mivoaka madio ary milaza amin'ny olom-pirenena izay voarakitr'izy ireo, manana ny zo rehetra izy ireo hahalala ny asa ratsiny voarakitra na amin'inona na amin'inona
Raha vao hatsahatra ny fangatahana ny fangatahan'ny olom-pirenena dia tokony hijanona tsy hihetsika ilay tompon'andraikitra.
Ny politika dia tokony hanambara mazava izay tokony hataon'ny tompon'andraikitra amin'ny firaketana an-tsoratra, sy ny sazy azo iharan'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny politika.
Ny fikojakojana ny angona sy ny fampiasana data
Izay horonantsary nodinihina sy nohamafisina mba hananana porofo dia tokony hotehirizina ary hotehirizina. Ireo horonantsary tsy hita miharihary dia azo esorina aorian'ny fotoana manokana.
Ny rojistan'ny mpiambina ny porofo dia tsy maintsy arovana tsara ary voaaro tsara.
Ny fidiran'ny tompon'andraikitra amin'ireo horonan-tsary dia tokony ho voafetra ihany ary rehefa omena azy ireo amin'ireny horonan-tsary ireny dia tokony hodinihina ny hetsika ataon'izy ireo ary tokony hatao ihany koa ny firaketana an-tsoratra.
Aorian'ny fanoratana ny tatitra voalohany dia tokony havela hijery ny fandraisam-peo ireo tompon'andraikitra satria mety hanampy azy ireo hahatadidy ireo zavatra tokony hampiana.
Ny fenitra fiarovana momba ny fiarovana ny data sy ny manampahaizana momba ny tontolo iainana dia tsy maintsy karamaina mba hihazonana ireny data ireny tsy hiditra amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fomba lavitra sy any amin'ny efitrano fanakorontanana ratsy.
Ny rafitra fanaraha-maso mahomby dia tokony hisy amin'ny fidirana tsy ara-dalàna na manelingelina ireo rakitra misy.
Tokony hampihena be ny fampiasana ny teknolojia izay misy marika ary raha tsy maintsy atao izany, tsy maintsy omena alalana avy amin'ny fitsarana izany
Isaky ny fizarana an-tsokosoko ho an'ny governemanta misy izay tokony hatao dia tsy maintsy mitaky ilay fandraisana andraikitra hampiasa ny politika izay mitarika ny sampana fizarana mba hialana amin'ny fifandirana.
Ny fidirana data
Isaky ny misambotra horonantsary manokana ny olona iray dia tokony avela hijery ny horonan-tsary toy izany izy ireo satria miseho ao aminy dia manana zo feno izy ireo ary hijery azy ireo ihany koa.
Ny famoahana horonantsary ho fangatahana firaketana ho an'ny daholobe dia tokony avela atao amin'ny fanarenana ampy.
Raha mamoaka horonantsary mifanaraka amin'ny raharaham-pitsarana dia tena ilaina tokoa fa manaraka ny fitsipika rehetra miharihary.
Ny fampiofanana mety dia tsy maintsy omena ny manamboninahitra rehetra izay homena fakantsary vatana, tsy maintsy azon'izy ireo ampiasaina tsara.
Ireo mpiandraikitra izay mampiasa fakantsary vatana dia tokony ampianarina ny fomba hanafintohina ny angon-dry zareo raha toa ka manao izany mandritra ny fametrahana ny tatitra voalohany.
Ny manamboninahitra dia tokony hohajaina tsara sy hiofana tsara momba ny politika momba ny tsiambaratelo ary ny fomba hisorohana ny fandosirana azy ireo hisorohana ny fahasarotana.
Ny fisian'ny politika sy ny fanovana
Ny politika rehetra mifandraika amin'ny fakan-tsary mifehy ny vatan'ny vatana dia tokony ho lalàna voasoratra ary indrindra azo ampiharina amin'ny vahoaka, ny fakantsary vatana manakaiky ny manamboninahitra sy ireo sivily izay ampiasaina. Ny sivily dia manan-jo hahalala ny politika izay mitarika ireo fitaovana neken'izy ireo dia azo ampiasaina mba hanatsarana ny fiarahamonina sy hanampiana ireo mpitandro filaminana amin'ny andraikiny.
Ny departemanta dia tokony ho vonona amin'ny fotoana rehetra handinihana ny politika ary hanova ny fotoana tsindraindray amin'ny fidirana ampahibemaso sy ny fampahafantarana azy ireo isaky ny fiovana.
Politika mety mifanaraka amin'ny famatsiam-bola federaly
Ny finaritra federaly dia tokony miankina amin'ny fampiharana ny politika manokana sy mahomby izay hiantohana ny fampiasana azo antoka ary koa manakana ny olana momba ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana.
Ho fehiny dia tsy misy fitsipika mazava izay misy milaza fa ny fakantsary vita amin'ny vatan'akanjo tsy maintsy ekena na tsy ekena, ny fanapahana tsirairay no afaka misafidy ny tenany raha maniry azy ireo ary azo antoka fa hahafantatra hoe nahoana izy ireo no handeha amin'izany. Na izany aza anefa dia mino fa ireo faritra nampihatra ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo torolàlana etsy ambony dia hiantoka tsara ny zon'ny programa momba ny lalàm-panorenana sy ny lanjany, izay tena zava-dehibe tokoa amin'ny fiaraha-monina rehetra
Ireo fomba fiasa hampiasa fakantsary miady amin'ny vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin